नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै काठमाडौँ महानगरका पाँच ठाउँमा स्मार्ट पार्किङ, शुल्क कति ? – BikashNews
नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै काठमाडौँ महानगरका पाँच ठाउँमा स्मार्ट पार्किङ, शुल्क कति ?
२०७५ चैत २८ गते १०:५२ विकासन्युज
काठमाडौँ । नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै नगरवासीले सवारी पार्किङ व्यवस्थापनको समस्याबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यूरोड आसपासका पाँच स्थानमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्थापन शुरु गरेसँगै सर्वसाधारण नागरिक पार्किङ समस्याबाट मुक्त हुने भएका हुन् ।
काठमाडौँ शहरको चरित्र, सरल उपयुक्त र दिगो तथा प्रयोगकर्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने पार्किङ व्यवस्थापनमा महानगरको प्राथमिकता रहेको प्रवक्ता डङ्गोलले बताए । “पार्किङलाई सहज बनाउन सकियो भने मात्र पनि शहरको यातायात प्रणालीमा ठूलो सुधार हुनेछ”, उनले भने ।
त्यसैगरी कामपाले सफा शहर निर्माणका लागि विगत दुई हप्तादेखि अत्याधुनिक ब्रुमरको माध्यमबाट सडक सफा गरिरहेको छ । पाँच रुट निर्धारण गरेर हरेक दिन बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म काठमाडौँका सडक सफा गर्दै आएको छ । यससँगै कामपाले स्मार्ट प्रतीक्षालय, हरियाली काडमाडौँ, सार्वजनिक शौचालय निर्माणजस्ता कामको शुरुआत गर्न बाँकी नै छ । रासस
हुण्डाई भेन्युको प्रवद्र्धन योजना सार्वजनिक, ‘टेष्ट ड्राइभ गर्ने ग्राहकलाई डोमेष्टिक होलिडे प्याकेज’
आर्थिक सुदृढीकरणका उपाय पहिल्याउन आग्रह